Maxay Somaliland Ku Doorbiday Xidhiidhka Diblomaasiyadeed Ee Taiwan?…Fallanqayn | hogaanka.org
Maxay Somaliland Ku Doorbiday Xidhiidhka Diblomaasiyadeed Ee Taiwan?…Fallanqayn
Jamhuuriyadda Somaliland 29 sannadood waxay dalalka reer Galbeedka, dawladaha Carabta iyo waddamada jaarka ka quuddaraynaysay in ay ka hesho aqoonsi buuxa ama xattaa mid dadban (de facto state). Madaxda iyo siyaasiyiinta Somaliland iskumay taxluujin jirin in ay xidhiidho la sameeyaan Beesha Caalamka inteeda kale oo laga heli kari lahaa dalal badan oo u diyaar ah xidhiidhka iyo saaxiibtinimada JSL.
Waxaynu qaadanay nidaamka dawladnimo iyo mabaadiida reer Galbeedka, waxaynu la ilaalinaa danaha ay ka leeyihiin gobolka, Somaliland sax iyo qalad ba waxay ku taageerta hadba waxay rabaan iyo hadba sida ay ula dhaqmayaan Dunida inteeda kale; Somaliland waxay dhankeeda isku xilqaantay in ay ka qayb qaadato la dagaallanka argagixisada caalamiga ah iyo budhcad badeedda.
Somaliland waxay xushmaysaa kuna dhaqantaa dhammaan xeerarka caalamiga ah hase ahaatee waxba kamay dheefin waxna kumay kasban.
Somaliland waxay u dhego nugushahay codsiyada iyo rabitaanka dalalka Carabta siiba kuwa khaliijka, dalalka ku loollamaya awoodda iyo amar ku taaglaynta Bariga Dhexe, xukuumadda Somaliland waxay la safatay isbahaysiga Sucuudiga, dawladda Imaaraadka gaar ahaan waxa loo hibeeyay dekedda Berbera, waxa loo ogolaaday Saldhig Militari iyagu se waxay ka gaabsadeen taageeridda qaddiyadda madaxbanaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
Siyaasadda Arrimaha Dibadda waxa saldhig u ah in colaadihii iyo jaar xumadii Jamhuuriyaddii Soomaaliya lagu bedelo nabad iyo in horumarka la iska kaashado oo laga hadho sheegashadii Jamhuuriyadda Jabuuti iyo qaybo ka mid ah Kenya & Itoobiya sida ku cad Distoorka Jamhuuriyadda Somaliland si dalalka Geesku uga soo kabtaan dib u dhicii iyo kala qoqobnaantii waana aragti iyo hal abuur Somaliland curisay hase ahaatee maanta waxa sheeganaya ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Ahmed oo aragti cusub uga dhigaya Beesha Caalamka.
Somaliland waxay dalalka jaarka ah si hagar la’aan ah uga caawisa in laga hor tago falalka argagixisada ee laga fulin lahaa dhulkooda, hase ahaatee may garwaaqsan qiimaha jiritaanka iyo xasilloonida JSL ugu fadhido amniga dalalkooda, balse qaarkood waxay gacan saar la leeyihiin cadowga Somaliland.
Kama soo horjeedo in xidhiidh wanaagsan lala yeesho dalalka kor ku xusan haddiise ay albaabada ka xidheen Somaliland waxay xaq u leedahay in ay garaacdo albaabo kale sida Ruushka, Hindiya, Iiraan, Israa’iil, Waqooyiga Kuuriya iyo qaar kale oo badan.
Waxa hubaal ah in qaarkood soo dhawayn doonaan xidhiidhka JSL. Si kastaba ha ahaateen madaxweynaha JSL iyo xukumaddiisa waxaan ku bogaadinaya ugu dambeyn in ay fahmeen saaxiibtinimada dhalanteedka ah ee dawladaha reer Galbeedka, Carabta iyo kuwa gobolka, waxaan hambalyaynaya majaraha cusub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo baadi goobka saaxiibo la isku hallayn karo.
Somaliland jawaabtii u horaysay waxay ka heshay dalkaTAIWAN; lama aqoonsana waa se dal yar oo hodan ah, waa dalka 7-aad ee ugu dhaqaalaha badan qaaradda Eeshiya, waana dalka 20-aad Dunida oo dhan, sidaas daraadeed xaggooda aqoonsi la’aanta Beesha Caalamku muhiim uma aha.
Akhrista bal u fiirso qodobada heshiiska labada dal:Iskaashiga siyaasadda, dhaqaalaha, ganacsiga, caafimaadka, dhismaha kaabeyaasha iyo wixii la mid ah.
Haddaba sida labada xukuumadood ka go’an haddii heshiiskani hirgalo Somaliland-na uga faa’iidaysato sida ugu haboon waxaan u malaynaya Somaliland in ay noqon karto waddanka ugu hodansan Geeska Afrika oo lagu soo hiran doono.
La soco qaybta dambe………
← UK announces first sanctions under new global human rights regime
Taiwan country profile →
Archives Select Month August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 February 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 April 2015